I-Hdmi Extender, i-Hdmi Switcher, i-Wireless 4k Hdmi Extender - Iqembu leBrocade
Isikhulisi se-4K se-HDMI
I-HDMI extender engenantambo
Uhlelo lokudlulisa ividiyo olungenantambo
Isixazululo Segumbi Lenkomfa
I-Brocade Smart Space Technology Co, Ltd.yibhizinisi elibalulekile elibhalisiwe esifundazweni saseSichuan, eChina, futhi liyingxenye yohlelo olukhulu lokutshala imali lweHigh Tech Zone eChengdu. Imikhiqizo yethu ikakhulukazi ifaka phakathi ama-switchers nabasabalalisi bamavidiyo aphezulu, nemikhiqizo yokudlulisa yesikhathi sangempela engeyona eyonakalisayo.
Ibanga elide 2624ft. Ukudluliswa kwevidiyo okungenantambo ...
Ukubukeka kweMini nebanga elide 656ft. I-Wirele ...
I-Ultra Long-Range Wireless 4K HDMI Extender Tran ...
Ukubambezeleka kweZero nokubiza okungabizi kakhulu 4K @ 60Hz HDMI E ...
Ubuchwepheshe obuphambili obuhamba phambili embonini kanye namakhono ocwaningo aqhubekayo kanye nentuthuko, ngenqwaba yamalungelo obunikazi wokusungula nemikhiqizo emisha enelungelo lobunikazi. Ukuqhamuka kobuchwepheshe bokudlulisa umsindo kanye namavidiyo wesikhathi sangempela sesikhathi sangempela njengokuchazwa okuphezulu, ukulungiswa okuphezulu, ukubambezeleka zero, ukusetshenziswa kwamandla aphansi, ibanga elide, njll., Futhi uzibophezele ekuhlinzekeni imishini nezixazululo kumakhasimende emhlabeni jikelele.
Imikhiqizo yochungechunge lweBrocade Zhizhi ikakhulu ibandakanya ukudluliswa kwesikhathi sangempela kwencazelo ephezulu engalahleki, kanye nokushintshwa nokusatshalaliswa komsindo nevidiyo ephezulu. Zisetshenziswa kabanzi embonini ye-HDMI yomsindo nokubukwa, ukufundiswa kwe-multimedia, izingqungquthela zamavidiyo nezingcingo, izibonisi ezinkulu, imibukiso, ezezimali nocwaningo lwesayensi, nokudubula ifilimu nethelevishini nezinye izindawo eziqondile.
Ukubamba izimpahla, ukukhuphuka kwentengo, nama-oda kuhlelelwe isigamu sokuqala sonyaka olandelayo! Umthamo wesisekelo sokufinyela esingu-8 intshi ugcwele
Ngenxa yokukhula okusheshayo kwesidingo sesicelo se-CIS yenzwa yesithombe, i-chip yokuphatha amandla i-PMIC, i-chip identification chip, i-chip ye-Bluetooth, i-chip chip ekhethekile, njll. Ngokuya kweSecurities Times, ngokwethulwa kancane kancane kwezingcingo ezingama-5G, isidingo ...
IBrocade Group yethule iChina-Central kanye ne-Eastern Europe Economic and Trade Cloud Fair kanye neChengdu Special Cloud Fair
Ngo-Okthoba 28, uChengdu wabamba ngempumelelo i-China-Central ne-Eastern Europe Economic and Trade Cloud Fair neChengdu Special Cloud Fair. Lo mcimbi uyingxenye ebalulekile ye-2020 China-Europe International Trade Digital Exhibiti ...
Kuhloswe ukwakha ibhizinisi lokuqala elisezingeni eliphezulu.
Ikheli:18 / F, Isakhiwo 6-2, Xinchuan Innovation and Technology Park, High-tech Zone, Chengdu, China